Hogaamiyeyaal mar cadaw isku ahaa haddana saaxiibo noqday - BBC News Somali
Kim oo ka dagaya tareenka
Shirkan labaad ee ay yeelanayaan Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dabo socda wareeggii koobaad ee taariikhiga ahaa ee sannadkii hore ka dhacay dalka Singapore.
Tareenka cagaarka iyo jaalaha ka kooban ee waday Kim ayaa tagay Dong Dang, safarkii uu kaga sii aaday Hanoi wuxuu u raacay gaari.
Kooxda baambayda iyo dad calamo wadhfinayo oo hareero taagan roog cas oo la goglay ayaa soo dhaweeyay.
Dareen ka dhashay labo nin oo u eg labo madaxweyne oo caan ah
Laamaha ammaanka, masuuliyiin iyo sawir qaadeyaal ayaa dhoobnaa marka uu tareenka ka soo dagayay Kim, ka dibna gaadhi sugayay ayaa loo sii galbiyay.
Kim ayaa daaqadda hoos u dajiyay muddo kooban ayuuna gacanta u luxay dadkii.
Ilaalada uu caanka ku yahay ee dharka madaw ayaa ku sii sugaysay boosteejada tareenka, gaarigiisa ayaana baxay ka dib markii ay muddo kooban garab ordayeen.
Waxaa loo malaynayaa in ay la socdaan walaashii Kim Yo-jong iyo Kim Yong-chol oo ah janeraal hore oo ka mid ah dadka ugu muhiimsan arrimaha wada xaajoodka.
Roog cas iyo calamo ayaa lagu salaamay Kim
Muxuu Kim tareen ugu raacay Vietnam?
Safarka tareenka ee Pyongyang illaa Vietnam ayaa qaatay muddo labo maalmood ka badan wuxuuna ahaa 4000 oo kiiloo mitir. Haddii uu Kim damci lahaa in uu diyaarad raaco muddo saacado ah ayuu ku tagi lahaa.
Markii uu Kim sii marayay Shiinaha wadooyinka ayaa loo xiray, khadadka tareenka ayaana la joojiyay.
Dadka baraha bulshada isticmaala ayaa aad u hadal hayay wadooyinka la xiray, saxmadda gawaarida iyo tareennada wakhtigoodii ka dib dhacay.
Boosteejada tareenka ee magaalada Dong Dang ee dalka Vietnam ayaa sidoo kale dadka laga xiray ka hor imaanshihii Kim ee Talaadada, markii uu halkaas yimid ka dibna 170km oo gaari ah ayuu safar u galay magaalada caasimadda ah ee Hanoi.
Arrin layaab badan sii leh ma aha in Kim uu safar tareen ah galay maadaama oo awawgii Kim ll-sung uu horay tareen u adeegsaday markii uu safarka ku tagay Vietnam iyo Bariga Yurub.
Arrintaas uu sameeyay kali ah ayaana taariikhda u galaysa Kim-ka da-da yar.
Tareenka khaaska ah ee Kim oo ayaa leh 21 qaybood oo aysan xabaddu karin waana mid loogu talagalay in lagu raaxaysto, wuxuu leeyahay fadhiyo maqaar ku dahaadhan yihiin iyo qolal lagu shiro, marka safarku ma ahayn mid rafaad badan.
Trump iyo Kim maxay Vietnam ka qaban doonaan?
Trump ayaa lagu wadaa in uu galinka dambe ee Talaadada gaaro, faahfaahinta qaabka uu shirkoodu u dhacayo ayaana hadda uun soo shaac baxaysa.
Trump ayaa kulan khaas ah oo wakhti kooban ah la qaadan doona Kim fiidnimada Arbacada ah ka dibna way wada cashayn doonaan iyagoo ay weheliyaan lataliyeyaashooda, sida ay sheegtay afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders.
Khamiista ayayna masuuliyiintu yeelan doonaan kulamo is xigxiga.
Maxay mar kale u kulmayaan?
Kulanka magaalada Hanoi ayaa lagu wadaa in aasaas loogu sameeyo waxyaabihii lagu heshiiyay kulankii taariikhiga ahaa ee ay Singapore ku yeesheen bishii Juunyo ee sannadkii hore.
Shirkii Singapore waxaa ka soo baxay hadallo afka u badan oo aan aad u caddayn, labada masuulna waxay ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nukliyeerka ah loo tirtiri lahaa, inkastoo aan marna la caddaynin sida arrintaas loo hirgalinayo.
Wax la taaban karo kama soo bixin shirkii hore
Si kastaba ha ahaatee dhanka dublamaasiyadda ayaa horumar yar laga sameeyay tan iyo wixii shirkaas ka dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, labada masuulba waxay dareensan yihiin in ay sarrayso waxyaabaha laga filayo in kulankan uu ka soo baxo iyo ay kala sixiixdaan waxyaabo la taaban karo oo muujinaya in horumar laga sameeyay wada xaajoodka.
Maxaa Vietnam loogu shirayaa?
Waa meel ku haboon marka dhinacyo badan laga fiiriyo. Waxay xiriir dublamaasi la leedahay Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, inkastoo ay mar cadaw la ahaayeen Maraykanka haddana waa meel uu Maraykanku tusaale u soo qadan karo marka laga hadlayo in labo dal ay wada shaqeeyaan oo colaaddii la soo maray laga gudbo.
Afkaar ahaan Vietnam iyo Kuuriyada Waqooyi waa dalal shuuci ah, inkastoo Veitnam ay horumar dhaqaale samaysay, noqotayna mid ka mid ah dalalka uu dhaqaalahoodu ugu korniin badan yahay qaaradda Aasiya, inkastooo xisbiga talada haya uu awooddii oo dhan haysto.